Online Khabar Patrika || इपिएल : फितलो व्यवस्थापन कि अम्पायर गलत ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) टी-२० क्रिकेटको फाइनल समीकरण पूरा भएको छ । प्रतियोगिताको फाइनलमा ललितपुर प्याट्रियट्स र भैरहवा ग्लाडियटर्सले उपाधिका लागि भिड्ने पक्का भएको छ । ललितपुर प्याट्रियट्सले पहिलो क्वालिफायर खेलमा काठमाडौं किङ्स इलाभेनलाई १ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो । त्यस्तै दोस्रो क्वालिफायरमा भैरहवा ग्लाडियटर्सले काठमाडौं किङस इलाभेनलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
प्रतियोगिताको फाइनल समीकरण पूरा भइसक्दा आयोजक र अम्पायरप्रति निकै नै असन्तुष्टि देखियो । मैदानका खेलाडी र टोलीका मालिकले मात्र हैन दर्शकले समेत गुनासो गरेका छन् । आयोजकले अम्पायरप्रति देखाएको सहानुभूतिले प्रतियोगिताका खेल र विश्वसनीयताप्रति दर्शकले समेत प्रश्नचिह्न गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौं किङ्स इलाभेन र ललितपुर प्याट्रियट्सबीचको खेलमा अम्पायरले गरेको गलत निर्णयले प्रतियोगिताप्रतिको विश्वसनीयता गुमेको छ । उक्त खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्ल काठमाडौंका सांसद सेखले फ्याँकेको आठौं ओभरको पाँचौं बलमा एलबिडब्लु आउट भएका थिए । तर ज्ञानेन्द्रले खेलपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै त्यसबेला आफू आउट नभएको बताएका थिए । उनले अम्पायरको गलत निर्णयका कारण ब्याटको इनसाइड एजमा लाग्दै प्याडमा लागेको बलमा आफु एलबिडब्लु आउटको सिकार हुनु अम्पायरको गलत निर्णय भएको बताए ।
उक्त खेलमा अम्पायरको त्यो निर्णय एक गलत होइन । उक्त खेलमा थप दुई स्पष्ट गलत निर्णय भएका छन् । जुन निर्णय खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणका बेला रि-प्लेमा बारम्बार देखाइएको थियो । उक्त खेलमा विनयकुमार झा र रामकैलाश यादवले अम्पायर गरेका थिए । प्रदीप साहुले फ्याँकेको ११ औं ओभरमा तीन विकेट गएको थियो । उक्त ओभरको पहिलो बलमा पवन सराफ मैदान बाहिरिएका थिए भने तेस्रो बलमा सन्दीप जोरा बाहिरिएका थिए । सन्दीप जोरा पनि एलबिडब्लुमा आउट भएको इसारा दिएका थिए । तर, रि-प्लेमा हेर्दा साहुको बल ‘नो’ बल थियो ।
ओभरकै चौथो बलमा सन्नी पटेल अम्पायरको गलत निर्णयको सिकार बने । ब्याटभन्दा निकै परबाट गएको बलमा अम्पायरले उनलाई क्याच आउट दिएका थिए । जहाँ सन्नीले अम्पायरको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केहीबेर मैदान छाड्न ढिलाइ गरेका थिए । उनलाई खेलपछि आयोजकले कारबाही पनि गरेको थियो ।
उनलाई खेल भावनाविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो । अम्पायरको निर्णयविरुद्ध पटेललाई तीन ‘डिमेरिट अंक’ र खेल रकमको ७५ प्रतिशत रकम जरिबाना गरिएको छ । कप्तान मल्लले भने पछिल्लो समय अम्पायरको निर्णय लगातार विवादास्पद बन्दै गएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कप्तान मल्ले भने, ‘खेलाडीले केही गल्ती गर्दा कारबाही तुरुन्तै हुन्छ ।’
अम्पायरहरुले भने लगातार गल्ती गर्दा पनि त्यसलाई वास्ता गरिएको छैन । यसबारे प्राविधिक समिति र आयोजक गम्भीर हुनुपर्छ । अम्पायरको गल्तीले खेलको नतिजा बदल्ने सम्भावना हुन्छ । मानव भएपछि गल्ती हुन्छ तर खेलको स्तर सुधार्न अम्पायरहरुले पनि आफूलाई निखार्दै लग्नुपर्छ ।’
कप्तान मल्लले आयोजकको व्यवस्थापनप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे । मल्लले थपे, ‘हामीले यसो गर, यता जाऊ, उता नजाऊ भन्ने धेरै भइरहेको छ । प्रतियोगिताको स्तरोन्नतिको प्रयास भइरहेको होला, तर त्यसलाई पनि राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै बुधबार भएको इलिमिनेटर खेलमा भैरहवा ग्लाडीयटर्ससँग ४ विकेटले पराजित हुँदै चितवन प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । खेलपछि पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै पृथुले प्रतियोगिताका क्रममा अम्पायरहरुको निर्णयमा खुसी हुन नसकेको बताएका थिए । ‘समग्र प्रतियोगिता राम्रै भयो । तर, म अम्पायरको निर्णयप्रति भने सन्तुष्ट छैन,’ कप्तान पृथुले भने, ‘तर, म एउटा जिम्मेवार खेलाडी हुँ मैले एम्पायरको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
दिनहुँपिच्छे व्यवस्थापन र अम्पायर निर्णयप्रति अन्तुष्ट हुनुले समग्र नेपाली क्रिकेट क्षेत्र र खेलाडीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? त्यो भने आयोजनाले मुनाफका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली क्रिकेट विकासका लागि सोच्न जरुरी छ । जुन कुरा खेलाडी, टोली मालिक र दर्शकहरुमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा आयोजकले हेक्का राख्न जरुरी छ ।